Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. Pier Giorgio Federico Aliberti as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Italian Republic to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Yangon – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar agrees to the appointment of H.E. Mr. Pier Giorgio Federico Aliberti as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Italian Republic to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Yangon
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Pier Giorgio Federico Aliberti as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Italian Republic to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Yangon.
H.E. Mr. Pier Giorgio Federico Aliberti was born in Cuneo, Italy in 1965. He graduated from the University “Luigi Bocconi” in Milan, Italy where he obtained the degree in Political Economy. In 1993, he joined to the Italian Ministry of Foreign Affairs. He then served in his various capacities at the Italian Ministry of Foreign Affairs, Italian Embassies in Nairobi, Kenya and in Copenhagen, Denmark and the General Secretariat of the Council of the European Union. From 1995 to 1997, he served at the Ecole Nationale d’Administration in Paris, France. In 2003, he was promoted to First Counsellor and served as the Head of EU Institutions Department of Directorate General for European Integration, Ministry of Foreign Affairs. He has been serving as the First Counsellor at the Italian Embassy in Washington D.C. USA since 2010.
Dated: 16 June 2015
မစ္စတာ ပီရာ ဂျော်ဂျီယို ဖီဒယ်ရီကို အယ်လီဘာတီ အား ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် ြပည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော အီတလီ သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက သဘောတူညီပြီး ြဖစ်ပါသည်။
မစ္စတာ ပီရာ ဂျော်ဂျီယို ဖီဒယ်ရီကို အယ်လီဘာတီ ကို ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် အီတလီနိုင်ငံ ကူနီယိုမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် အီတလီနိုင်ငံ မီလန်မြို့ရှိ လူဂျီ ဘိုကိုနီတက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် အီတလီနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ အီတလီနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကင်ညာနိုင်ငံ၊ နိုင်ရိုဘီမြို့နှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ ကိုပင်ဟေဂင်မြို့တို့ရှိ အီတလီသံရုံးများနှင့် ဥရောပကောင်စီရှိ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးတို့တွင် တာဝန် အဆင့်ဆင့်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၇ ခုနှစ် အထိ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပါရီမြို့ရှိ အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပထမ သံမှူးအဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံရပြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ ဥရောပပေါင်းစည်းရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရှိ ဥရောပ အဖွဲ့အစည်းများဌာန အကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ အီတလီ သံရုံးတွင် ပထမသံမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိ ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်။